Thola konke mayelana nosuku lokungabi nabuthakathi - I-World March
Thola konke mayelana nosuku lokungabi naluvivinyo
Ikhaya » Thola konke mayelana nosuku lokungabi naluvivinyo
Ubudlova obusetshenziswa njengethuluzi lokuxazulula izingxabano ezithile kulo lonke umlando kubangele izinkinga ezinkulu ekuhlanganiseni phakathi kwamasiko ahlukahlukene kanye nemiphakathi. Njengamanje, izinhlangano ezihlukene zisebenza usuku nosuku ukukhuthaza ukubonakala kwamacembu ahlukene okwenza imicimbi efana nokunye usuku lokungabi naluvivinyo nezinsuku ezifanayo, ezihlobene nesihloko. Kuwo wonke unyaka singathola izinsuku ezahlukene ezihlose ukudala ukuqaphela izinkinga ezidinga ukubonakala. Phakathi kwezinsuku ezihlobene nodlame ungathola okuvelele njengosuku lwangaphandle lokungabi nabuthakathi.
Umlando usungulwe ngesisekelo sezimpi, izinkinga ezingapheli kanye nokuphulwa kwamalungelo abantu. Amakhosi adalwe ngenxa yokubhujiswa kwabantu, ukwephulwa kwenkululeko nokugqilazwa komuntu. Kuye ngezinkambiso zomlando zenkathi eziye zakha izakhiwo ezahlukene zikahulumeni nokucindezelwa, kanti nakuba ngezigaba eziningi amasiko athile ayelokhu ehlakulela ama-ejensi ekukhuthazeni amalungelo, kube khona amaqembu ashiywe ngaphandle kwamaphethelo omthetho, abangela ukuxoshwa nobudlova kubo.
1 Ziyini izinsuku zokungabi naluvila okubalulekile?
2 I-2 Okthoba: Usuku Lwamanye amazwe Lokungabi Nesibindi
2.1 Kungani usuku lokungabi naluvalo nokuthula?
3 Usuku lwangoNovemba lwe-25 lokungabi nabuthakathi ngokumelene nabesifazane
3.1 Isizathu sokuba khona kwalolu suku: Usuku lukaNovemba lwe-25 lokungabi nabuthakathi ngokumelene nabesifazane
3.2 Kungani ukhuthaza ukugubha usuku lweNovemba lwe-25 lokungabi naluvivinyo?
4 Usuku lwesikole lukaJanuwari 30 lokungabi nokuthula nokuthula
4.1 Kungani usuku lokungabi nabuthakathi nokuthula kugujwa ku-30 ngoJanuwari okhethiwe ezikoleni?
5 I-19 kaNovemba ngosuku lomhlaba ngaphandle kobudlova kubantwana nezingane
5.1 Usuku lomhlaba jikelele lokungabi nabuthakathi nokuvimbela ukuxhashazwa ngokocansi nokuhlukunyezwa
5.2 Izinkomba zokuhlukunyezwa kwengane
6 Isitatimende sokugcina ngosuku lwamazwe omhlaba wobudlova obhekene nokungabi naluvivinyo
7 ISpain iholela emhlabeni wonke usuku lwangaphandle lokungabi nabuthakathi
Ziyini izinsuku zokungabi naluvila okubalulekile?
Ukunyakaza komphakathi okuxhunywe ku usuku lwamazwe angaphandle lokungabi nabuthakathi Kuneziningana. Futhi kunezinsuku eziningi zokungabi nabulungisa ekhalendeni, zigxile emikhakheni ehlukene yabantu, njenge:
Usuku lomntwana olungenasivikelo
Usuku lwe-25 lokungabi nampofu ngokumelene nabesifazane
Usuku lwamazwe omhlaba wokungabi nabuthakathi, olune-2 ka-Okthoba
I-30 kaJanuwari, Usuku lweSikole Sokungabi Nesibindi esingafanele sidideke nosuku lwengane engeyona intukuthelo
Usuku Lwamanye amazwe Lokungaboni Nokuthula.
Bonke, nakuba besebenza ezindaweni ezihlukahlukene zendaba, baqaphele imizamo yabo yokulwa nobudlova emikhakha ehlukene futhi bahlangane nomgomo: kungenzeka ukuthi baqede noma yikuphi ukuziphatha okubudlova okukhona emhlabeni, okuvumela ukuthula kufinyelele konke emagumbini eplanethi, ngakho-ke izakhamuzi ezifanayo zingaba nemalungelo kanye nemisebenzi efanayo
I-2 Okthoba: Usuku Lwamanye amazwe Lokungabi Nesibindi
Usuku lwamazwe omhlaba wokungabi nabuthakathi i-Okthoba 2 ikhunjulwa, njengoba sekuyisikhathi ukugubha ukuzalwa kukaMahatma Gandhi. Futhi ukuthi ifilosofi kaGandhi isekelwe ekusetshenzisweni kwenkhulumomphendvulwano yokuxazulula noma yikuphi ukungqubuzana.
Kwakuyi-15 kaJuni ngonyaka we-2007, lapho i-General Assembly yeZizwe Ezihlangene, isimemezela ngesinqumo se-61 / 271, ukuthi ukungaqiniseki kwe-Okthoba 2 kwakuyoba usuku olukhethiwe. Lolu suku lokungabi naluvalo lusetshenziswe njengenhlawulo yomhlaba ukukhumbula abantu abahlukahlukene abavelele abaye balwa nawo wonke ukuphila kwabo ukuze bathole umphakathi onobulungisa kakhulu.
Kungani usuku lokungabi naluvalo nokuthula?
Isiko esakhela usuku lwezwe lokungabi nabulungisa sigxile njengokulwa kwamalungelo omphakathi kanye nezinguquko zomphakathi, ngoba lokho okuhloswe ukugcina impilo yomuntu usebenzisa ukuthula njengethuluzi.
Abaningi bazibuza ukuthi usuku lokungabi nabuthakathi lungakanani, futhi kungani kudingwa usuku lokuthula nokungabikho kobudlova. Futhi yilokho ngokusho kochwepheshe beSuku Lwamanye amazwe Lokungabi Nesibindi, kusiza ukudala ukuqwashisa emhlabeni jikelele mayelana nokusetshenziswa ngokweqile kobudlova ekuxazululeni izingxabano phakathi kwamazwe naphakathi kwazo.
Yingakho usuku lwe-2 lwango-Okthoba lokungabi nampofu luyisikhathi sezinhlangano ezihlukene ukuphatha imicimbi eyenza kubonakale ukudlwengula okwedlulele okukhona emhlabeni, kokubili ngokuqondile nangokwemvelo. Ukuqinisekisa lolu suku lokungahambisani nobudlova ngendlela esebenzayo ongabamba iqhaza emikhondweni ehleliwe emhlabeni wonke, noma ohlangene nezinhlangano ezisebenzayo ekugqugquzelweni kokudala usuku lokuthula nokungabi naluvivinyo ngokusebenzisa amathuluzi wokuhlanganiswa futhi inhlonipho.
Ngenxa yalesi sizathu, uma ufuna ukubamba iqhaza ngosuku lwe-Okthoba 2 lokungabi naluvivinyo ezenzakalweni ezehlukene ezenzeka emadolobheni nasemadolobheni, kungcono ukuya enhlanganweni ehlobene usuku lokungabi naluvalo nokuthula futhi unikeze ukusebenza kuzo.
Kubalulekile ukuqaphela usuku, ngoba kuvamile ukudideka ukucabanga ukuthi yilolu suku lukaNovemba lwe-2 lokungabi nabulungisa, lapho kufanele sigcizelele, ukuthi yi-2 ka-Okthoba. Futhi yilokho ngezinye izikhathi uthola ulwazi olungalungile kwi-intanethi engabangela ukudideka.
Usuku lwangoNovemba lwe-25 lokungabi nabuthakathi ngokumelene nabesifazane
Lesi sihloko singenye yezinto ezifanele kakhulu futhi okwamanje sisemlonyeni womhlaba wonke. Isizathu siwukuthi ubudlova obugxile kwabesifazane ngenye yezingxabano ezenza kube nzima imiphakathi ukuqhubekela phambili ngokubambisana.
El I-25 November ngosuku lomhlaba wonke ngokumelene nodlame olubhekiswe kwabesifazane, kuhloswe ukuba kubonakale wonke amamodeli wobudlova asetshenziswe kuleli qembu nokuthi ngezikhathi eziningi udelelwe noma uthule.
Isizathu sokuba khona kwalolu suku: Usuku lukaNovemba lwe-25 lokungabi nabuthakathi ngokumelene nabesifazane
Udlame olubhekiswe kwabesifazane luhlanganisa izenzo nezimo ezifana nodlame lobulili, ubudlova obunzima, ukuhlukumeza, ukudlwengula noma ukungalingani kwemali, phakathi kwabanye.
Zonke lezi zimo zisho ukuthi abesifazane babhekwa njengabantu abaphansi ngaphansi kwezici eziningi uma kuqhathaniswa namadoda, noma banikezwa izindima zobulili ngenxa yeqiniso lokuba ngabesifazane, njengengxenye yomnakekeli noma umama wendlu.
Kungani ukhuthaza ukugubha usuku lweNovemba lwe-25 lokungabi naluvivinyo?
Ubudlova obusungulwe ngokobulili besifazane ngenye yezindawo ezithandwa kakhulu, ukulwa nalo. Ngonyaka we-1993, Isimemezelo Sokuqeda Udlame Olubhekiswe Kwabesifazane sakhishwa yi-UN General Assembly. Futhi kubhekwa ukuthi ukuze kuqedwe isimangalo se- Usuku lwe-25 lokungabi naluvalo nokuthula Kuyadingeka ukuthi bobabili amantombazane nabesifazane (abakha ingxenye engaphezu kwesigamu yabantu bezwe) baphila ngaphandle kokwesaba, ngaphandle udlame lwasekhaya, emphakathini ophephile futhi ofanelekile kubo.
Futhi ngenkathi kuyiqiniso ukuthi njengoba ubudlova 25 Novemba 2017 aseqalile ukuzwa inqubekelaphambili enkulu yokuqwashisa kule ndaba kuze amalungelo kungukuthi kufinyelelwa, abaningi babheka ukuthi izinkampani emhlabeni wonke kungukuthi ethuthuka kahle nangokulinganayo ebhekiswe zokuziphatha, ngokusekelwe ezimisweni zokulingana nokubekezela.
Usuku lwesikole lukaJanuwari 30 lokungabi nokuthula nokuthula
I-January 30 usuku lwesikole lokungabi naluvalo nokuthula Isikhumbuzo sokufa kukaMahatma Gandhi, owayengumholi wezwe kanye nomoya waseNdiya, kugubha. Lolu suku lugujwa kusukela ngonyaka we-1964, kodwa kwakungakaze kube ngonyaka we-1993 lapho i-UN ikuqaphela.
El Usuku lukaJanuwari Usuku Lwezwe Lokungabi Nabulungisa 30, izenzo ezihlukahlukene zenziwa ezikoleni ukukhuthaza ukuthula emhlabeni. Kuyinto evamile kulolu suku lwesikole olungelona ubudlova nokuthula okwenzekayo, njengokuthi usuku lwezinsuku zokuthula nokungabi naluvivinyo, noma izingoma ezihlobene nokuthula nazo zihlabelelwa futhi zivusa isimo esiphila ezweni noma kwenye indawo emhlabeni.
Kungani usuku lokungabi nabuthakathi nokuthula kugujwa ku-30 ngoJanuwari okhethiwe ezikoleni?
Lolu suku lukhethwa izikhungo zemfundo ukwenza imisebenzi ehlukene nabancane. Lezi zinsuku zivame ukuqhutshelwa kuyo yonke ingane kanye nesiteji esiyinhloko, futhi kuhloswe ukuthi izingane ziyazi izibalo ezimele ukunyakaza okungenasizotha nokuthula. Phakathi kwezibalo ezimele kakhulu uMahatma Gandhi, uNelson Mandela, uMama Maria Teresa waseCalcutta noma uMartin Luther King.
Kubalulekile ukusebenza ngosuku ezincane lembulunga yonke elinezinto ezinhlobonhlobo ebudloveni kusukela ngiyingane, futhi nsuku zonke abathintekayo isikhathi ezihlobene ngosuku ukuthula futhi ayemelene nobudlova, ezifana usuku lomhlaba nodlame 25 November, I-2 Ngo-Okthoba ngosuku lokungabi nampofu kanye nokuthula noma usuku lwesikole lokungaboni nokuhlukunyezwa.
I-19 kaNovemba ngosuku lomhlaba ngaphandle kobudlova kubantwana nezingane
I-November 19 yiyona usuku lwentsha nentsha engeyona inkululeko, kuhloswe ukuba kubonakale ukuhlukumeza okwenziwe kumncane kunabo bonke. Kwakukhona ngonyaka we-2000 uma lolo suku lukhethwa ngokuzenzakalelayo ukuze kutholakale izinyathelo eziphuthumayo neziphumelelayo yi-States. Ngaphezu kwalokho, i-November 20 ikhunjulwa ngokuvumelana ngosuku lwezingane zamazwe ngamazwe.
Lolu suku olungezona ubudlova lwezingane lusetshenziselwa ukuqhakambisa ukuthi yiziphi izindlela ezivame kakhulu zokuxhashaza izingane nokuthi yiziphi amathuluzi abangayisebenzisa ukuphakamisa amabellisi e-alamu abantu abadala abathembekile abakuzungezile.
Usuku lomhlaba jikelele lokungabi nabuthakathi nokuvimbela ukuxhashazwa ngokocansi nokuhlukunyezwa
Ukuxhashazwa nokuxhashazwa kwezingane kanye nabantu abasha kuyinkinga ephathelene nawo wonke amazwe emhlabeni wonke. Futhi yilokho uhlobo lokuhlukunyezwa alukwazi ukuhlukanisa uhlanga, izwe, isiko noma isimo senhlalo.
I-Los amacala okuhlukunyezwa nobudlova kubantu abancane Bazenzelé amakhulu izinhlangano kanye izinhlelo zikahulumeni ziqala ukuthatha isinyathelo kanye nokuqalisa izinhlelo zemfundo kanye alamu ukuze la macala, unalo futhi ngaleyo ndlela ukusungula yezifiso sokuthatha isinyathelo yonke imikhakha: imikhaya, esikhungweni semfundo nezindawo ezokungcebeleka .
Izinkomba zokuhlukunyezwa kwengane
Ochwepheshe badala uhlu lwezinkomba ezivame kakhulu ezingatholakala ezinganeni nasebancane lapho behlupheka noma behlukunyezwe:
Izimpawu zomzimba: ukulimala ezindaweni eziseduze, njengegazi, ukuvuvukala noma ukutheleleka.
Izimpawu ze-Psychic: ukwesaba, ama-phobias, ama-nightmares aphindaphindiwe, ukulala okungahleli lutho. Ukuziphatha okubi noma ukuziphindaphinda kwamakhono asevele atholakale.
Ukuziphatha ngokocansi okuqala, ukuhlubuka komndeni kanye nesikole, ukusebenza okungekho emfundweni.
Lo mhlahlandlela wenzelwe ukuze amalungu omndeni, abangani noma othisha bakwazi ukuthola izimpawu ezincane kunazo zonke zokuhlukunyezwa ngaphandle kokuthi bazitshele ngamazwi ngakho.
Isitatimende sokugcina ngosuku lwamazwe omhlaba wobudlova obhekene nokungabi naluvivinyo
Ngeshwa, kubonakala sengathi sonke isikhathi usuku international zobudlova, besina phakathi kwayo yonke izingxabano ezikhona emhlabeni, nabo bonke ukuhlukumeza kuyo yonke imiphakathi, kungakhathaliseki ukuthi ezibhekwa ophucukile noma cha.
Kuncike kumasiko wezwe ngalinye kanye nentuthuko noma izinselelo emalungelweni anakho, izinhlobo ezahlukene zobudlova zingabonwa. Abantu abaningi bangase bacabange ukuthi emazweni athuthukile bekungekho isidingo sokugubha usuku lomhlaba ngokumelene nokungabi naluvivinyo, ngoba bacabanga ukuthi akusekho noma ukuthi kuncane noma kufanelekile.
Kodwa ngeshwa kuba okuphambene nalokho, ubudlova buyingxenye yomuntu, futhi ukuqeda kuqala kubalulekile ukuqwashisa ngobukhona bayo, futhi kubonakale ukuthi yiziphi izimo ezivela ekukhanyeni, nokuthi yini ebonwa ubudlova.
ISpain iholela emhlabeni wonke usuku lwangaphandle lokungabi nabuthakathi
I-Spain izwe elibhekwa njengezwe lokuqala enkulumeni yentando yeningi yentando yeningi, nomthethosisekelo okuthiwa uvikela futhi unikeza amalungelo kuzo zonke izakhamizi zawo.
Kodwa iqiniso liwukuthi kuwo wonke umlando wamuva kakhulu kuleli zwe kuye kwaba nezimo zobundlovu obukhulu, kokubili okucacile futhi okucacile. Ubudlova basekhaya (usuku lwabo olubudlova buka-25 November) luhlala lukhona ubunzima obukhulu obukhukhula kulo mphakathi.
Ibuye yabhekana nezigaba lapho ubuphekula besongela impilo yansuku zonke yabakhileyo bayo. Phakathi izenzo umbhikisho ka ukukhathazeka esiphezulu ukuthi bekulokhu ngqo ngeso lengqondo kade 1 Okthoba ubudlova esenzeka Catalonia, ngenxa inhlolovo ukuthi incishisiwe ngu amabutho ezokuphepha ngubani ngamandla Ahlasela izakhamuzi. Ngenxa yalesi simo, Usuku Lwezwe Lokungabi Nabulungisa 2017 Kwakubaluleke kakhulu.
Uma ucabangela ukuthi Spain ingenye imiphakathi ophucukile kakhulu, futhi naphezu kwalokhu, ukuhlukunyezwa abaningi amalungelo nasetetsembisweni abantu sizibophezele, kulula ukucabanga ukuthi kwenzekani kwamanye amazwe nge amazinga aphansi noma kungekho intando yeningi noma shí empini.
Kuzo zonke lezi zizathu kunezinhlangano ezikhuthaza ukulwa kwamalungelo abantu, njengoba kunjalo I-World March for Peace and Nonviolence, abasebenza unyaka nonyaka, emazweni omhlaba ukuqwashisa izakhamuzi kanye nohulumeni bazo mayelana nokubaluleka kokungasebenzisi udlame.